Acryli Ibé akwụkwọ, Acryli Mirror mpempe akwụkwọ, Plastic Mirror mpempe akwụkwọ - Donghua
E hiwere DHUA na 2000 iji nye mpempe akwụkwọ acrylic dị elu, mpempe akwụkwọ eji achọ mma na ọtụtụ ụdị akwa enyo.
IHE banyere akụkọ
Na-arụpụta ngwaahịa dị elu mgbe niile
Akwụkwọ mmado-akwụkwọ ahụaja-acha uhie uhie
A na-etinye mkpuchi mgbochi foogu na Dhua elu mma polycarbonate mirror na klas 10 ụlọ dị ọcha. Anti-Fog mirror na-arụ ọrụ iji guzogide fogging n'okpuru toughest ọnọdụ. A na-ejikarị igwe ajị ajị / ịsa ahụ, enyo eze, na sauna, ngwa ụlọ ọrụ ahụ ike. Aha aha mgbochi Mirror, Igwe Igwe Na-adịghị Ahịrị, Igwe Igwe Na-adịghị Egwu Ihe Polycarbonate (PC) Agba Clear Sheet size 915 * 1830mm, omenala ịkpụ-to-size ọkpụrụkpụ 1.0 - 6.0 mm Masking Polyfilm MOQ 50 Ibé akwụkwọ ...
Nchekwa Nchedo na Nchekwa, Okporo Roadzọ Okporo Conzọ Okporo Conzọ Convex A na-enyo enyo na-atụgharị ihu (ma ọ bụ ihu ọ bụla na-atụgharị uche na akụkụ nke okirikiri) nke akụkụ ya na-eche ihu na isi iyi nke ìhè. Ọ na-egosiputa onyogho dị obosara n’ogo belatara iji gbatịa echiche iji nyere aka nwekwuo ọhụhụ n’ọtụtụ ebe maka nchekwa ma ọ bụ ngwa nyocha na nyocha nke ọma. DHUA ọnọde ndị kasị mma mma convex enyo nke na-enye superi ...
Na-erite uru site n'ịbụ ndị dị fechaa, mmetụta, na-eguzogide ọgwụ, na-adịchaghị ọnụ ma na-adịte aka karịa iko, a ga-eji mpempe akwụkwọ enyo acrylic anyị dị ka ihe ọzọ na enyo ọdịnala ọdịnala maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ. Dị ka ihe niile acrylics, anyị acrylic mirror Ibé akwụkwọ nwere ike mfe ebipụ, gbapuru, guzobere chepụtara na laser etched. Ngwa enyo anyị nwere n'ụdị dị iche iche, ike na nha, anyị na-enyekwa nhọrọ nhọrọ ịkpụcha. Aha aha Clear acryli plexiglass mirror ...
Clear Plexiglass Acrylic Sheet, Transparent Plastic Sheet Acrylic, nke a makwaara dị ka Plexiglass, bụ thermoplastics ma na-ebutekarị na mpempe akwụkwọ dị ka mpempe dị arọ ma ọ bụ na-eguzogide ọgwụ. Clear Acrylic Sheets na-egosiputa àgwà yiri iko-nke doro anya, nchapụta, na nghọta-mana ọkara ọkara na ọtụtụ oge mmetụta nke iko. Ọ dị mfe ịkpụpụta, agbụ nke ọma na nrapado na ihe mgbaze, ma dịkwa mfe na-ekpo ọkụ na-enweghị ọnwụ nke nghọta doro anya. Donghua tumadi ...
Mpempe akwụkwọ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, na-enyo enyo, na-eguzogide ọgwụ, na-adịchaghị ọnụ ma na-adịte aka karịa iko, a ga-eji akwa mpempe akwụkwọ anyị nwere ọtụtụ ihe dị iche na enyo ọdịnala maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ. Dị ka ihe niile acrylics, anyị acrylic mirror Ibé akwụkwọ nwere ike mfe ebipụ, gbapuru, guzobere chepụtara na laser etched. Akwa enyo anyị nwere n'ọtụtụ agba, ọkpụrụkpụ na nha, anyị na-enyekwa ịkpụ ...
High Gloss PETG Mirror Sheet, PETG Plastic Mirror Sheet PETG mirror sheeting bụ nnọọ vasatail plastic sheeting ọtụtụ ndị na-eji na engineering, ntecha, nchekwa containers, na ndị ọzọ dị ka ọ na-adị mfe thermoformed na bee ike mgbagwoju shapes na kpọmkwem nkọwa. PETG mirror na-enye ọtụtụ ụdị uru site na nghọta doro anya, njigide gloss elu, enweghị nrụgide na-acha ọcha, na-anabata ink na agba, yana FDA-kwadoro maka kọntaktị nri. PETG Mirror mpempe akwụkwọ awade vasatail fabricgha ...
Polycarbonate Mirror, PC Mirror, mirrored polycarbonate mpempe akwụkwọ Dị ka a maara nke ọma, polycarbonate mirror bụ ihe kasị mmetụta na-eguzogide mkpụrụ. Igwe anya anyị nke polycarbonate (PC) bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihu enyo nke nwere nnukwu okpomọkụ na nguzogide na ike ike. Offọdụ n'ime uru nke enyo polycarbonate anyị bụ nnukwu mmetụta dị ike, ogologo oge, nguzogide ọkụ dị elu, kristal-doro anya na nkwụsi ike akụkụ. Anyị nwere 0.25 ~ 6 mm ọkpụrụkpụ, 915 * 1830 mm size, doro anya na ọla ọcha na agba availabl ...
Mirror Wall Sticker, Removable Acrylic Mirror Stickers DIY Wall Decor Mirror Non Glass Mirror for Home Living Room Bedroom Deoror Ihe ndozi enyo mara mma maka ụlọ gị ma ọ bụ ọfịs ga-enye ụlọ gị ihe na-enye ume ọhụrụ, mepụta ikuku na-atọ ụtọ ma nyekwa gị mmetụ dị ịtụnanya. ime. Dhua mirror mgbidi ihennyapade decal ka nke plastic acrylic, elu na-atụgharị uche na azụ nwere mama onwe ya; Enwere ihe nkiri nchedo n’elu enyo ahụ iji gbochie mirro ...
Biko Hapụ ozi anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
Thermoplastics bụ ezigbo ụzọ maka ngosipụta na ihe ọhụrụ. Nhọrọ anyị nke dị elu, mpempe akwụkwọ acryli dị ọtụtụ na ngwa enyo enyo na-enyere ndị na-emepụta aka iweta ọhụụ ha na ndụ. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke agba, ọkpụrụkpụ, ihe nakawa etu esi, mpempe akwụkwọ nha na polima formulations iji gboo mkpa nke imerime nka na imewe ngwa. Anyị na-enye nnukwu nhọrọ nke acrylic aghụghọ & n'ichepụta maka ndị na-ere ahịa & azụmaahịa na ịchọ ụlọ mma na ọtụtụ o ...
Nkọwapụta ngwaahịa acrylics bụ polymer nke methyl methacrylate (PMMA), nwere ọtụtụ ihe bara uru maka ngosipụta na ngosipụta azụmaahịa ma ọ bụ ngosipụta nzụta. Ha doro anya, dị fechaa, siri ike & na-eguzogide ọgwụ, a na-ahaziri ya, dị mfe ịkpụpụta na ịdị ọcha. Ohere dị na acrylics gafere ngosipụta ngosipụta azụmaahịa. Acrylics bụ nhọrọ a ma ama maka ụlọ ahịa ndị ọzọ dị ka mannequins, ngosipụta windo, racks nwere mgbidi ma ọ bụ shelf, ihe ngosipụta ngosipụta na akara ngosi ...
Nkọwa ngwaahịa Acrylic enwetawo ihe a ma ama karịa iko maka ịmepụta na afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ezi ihe kpatara ya. ● Ọ bụ shatterproof na fechaa, dị iche na iko. Njirimara a na - eme ka foto dị mma nke na - arụ ọrụ na ụmụaka na ezinụlọ - ọkachasị ụmụ ọhụrụ. Kwụnye otu osisi na ngalaba acrylic na ebe a na-akwalite akwụkwọ ma ọ bụ ebe a na-egwu egwu dị nchebe karịa iko ọzọ, ebe ọ ga-emerụ onye ọ bụla obi ma ọ daa. Ọzọkwa, shatterproof na lightweigh ...
Nkọwa ngwaahịa Ihe ndị a na-ejikarị maka ngwa ọkụ bụ acrylic na polycarbonate. Acrylic plexiglass na polycarbonate sheets bụ akwụkwọ plastik siri ike ma na-adịgide adịgide nwere ohere ọhụụ na-elu-nke-akara. DHUA na enye otutu mpempe akwụkwọ acrylic maka ngwa ọkụ gị. A na-eji acrylic anyị na-arụ ọrụ na-eme Light Light Panel (LGP). LGP bụ uzo acrylic transperent sitere na 100% Virgin PMMA. A na-arụnye ọkụ ọkụ na nsọtụ (s) ya. Ọ na-eme l ...
Acrylic bụ otu n'ime ihe ndị eji eme ihe iji gosipụta POP, ọkachasị na ụlọ ọrụ dịka ntecha, ejiji, na teknụzụ dị elu. Anwansi nke acrylic doro anya dị na ikike inye ndị ahịa ọhụụ zuru oke nke ngwaahịa a na-ere ahịa. Ọ bụ ihe dị mfe iji rụọ ọrụ ebe ọ bụ na enwere ike ịkpụzi ya, belata ya, agba ya, mebe ya ma jikọta ya. N'ihi ihu ya dị larịị, acrylic bụ nnukwu ihe eji eji ebi akwụkwọ. You'll gha enwe ike idowe ihe ngosi gi maka y ...
Ihe nrịbama sitere na DHUA na-ekpuchi bọọdụ mkpọsa, akara akara, akara ngosi ụlọ ahịa na-ere ahịa na ngosipụta mgbasa ozi ọdụ ụgbọ. Ngwaahịa ndị a na-ahụkarị na-agụnye akara ndị a na-ahụ anya, bọọdụ mkpọsa dijitalụ, ihe nlere vidiyo na akara ngosi neon. Dhua na-enyekarị ihe acrylic nke dị na ọkọlọtọ, na mpempe akwụkwọ na ịkpụ akwa maka ntinye akara. Ihe ịrịba ama acrylic bụ mpempe akwụkwọ plastik nke na-egbuke egbuke. Ọ na-abịa na ọtụtụ dị iche iche na agba gụnyere frosted na doro anya. Signdị akara a bụ l ...
DHUA na-arụpụta ihe ngosi convex & enyo na-enyo enyo, enyo anya ntụpọ na enyo nyocha nke sitere na mpempe akwụkwọ enyo acrylic dị mma nke na-adị mfe, na-eguzogide ọgwụ na nghọta doro anya. A na-eji enyo DHUA convex enyo maka ụlọ ahịa, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọgwụ, ebe ọha na eze, itinye ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nchekwa, ebe a na-emepụta ihe, ebe a na-adọba ụgbọala na ụzọ si n'okporo ụzọ na n'okporo ụzọ. Edepụtara nke iji a convex mirror maka nchekwa na nchekwa dị ka n'okpuru: fechaa, ...
Kedu rorsdị Igwe Mbara Igwe nke Pụrụ Imechi Anya Igwe Enyo na-enweghị nrụrụ na nnukwu mpaghara? Nke mbu anyi kwesiri ighota njirimara ndi a: 1. Acrylic mirror (Acrylic, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate) Uru: nghọta di elu, mkpuchi enyo ...
Ahịa maka Plexiglass na-agba ọsọ Plexiglass bụ ihe na-ekpo ọkụ na mberede, ebe mkpa maka ịkpapụ mmekọrịta na nchekwa abawanyela. Nke ahụ pụtara nnukwu nnukwu azụmahịa maka azụmaahịa acrylic plexiglass. Ọgba aghara nke oku malitere n'etiti ọnwa Machị. Dị ka ọrịa coronavirus na-efe ọsọ ọsọ ...
Esi Wụnye Mpempe akwụkwọ Acryli
Esi Wụnye Acryli Mirror mpempe akwụkwọ Acryli mirror mpempe akwụkwọ na-eme ka a bara uru na ndị mara mma mgbakwunye na mgbidi, ibo ụzọ, entryways na ndị ọzọ, na-agbakwunye a oge a aka ọ bụla ohere ị rụnyere ya. iko mgbe ịbụ s ...